Madaxweyne Trump oo ka oohiyey gabar madow ah oo uu ninkeeda dhintay - Caasimada Online
Home Dunida Madaxweyne Trump oo ka oohiyey gabar madow ah oo uu ninkeeda dhintay
Madaxweyne Trump oo ka oohiyey gabar madow ah oo uu ninkeeda dhintay
Myeshia Johnson oo ah carmaladdii uu ka dhintay laba alifle La David Johnson ayaa u sheegtay ABC News in codka “hubaal a’aantu” ka muuqatay iyo siiqada “ay ka oohisiisay”.
“Haddii saygaygu uu u dagaallamay dalkan oo uu naftiisa halis u galiyey, maxay tahay sababta aadan u xusuusan karin magaciisa?” ayey tiri
Madaxweyne Trump wuxuu isku difaacay Twitter, “waxaan wadahadal xushmad ku dheehan tahay la yeeshay carmaladdii laba alifle La David Johnson, waxaanan sheegay magaciisa billowgiiba anigoo uusan shaki iga gelin” ayuu yiri.
Wuxuu ku gacan sayray hadalkii Ms Wilson oo uu ku tilmaamay “mid la been abuuray”.
Federica Wilson waxay u sheegtay WPLG oo ah TV ku yaalla Miami inay maqashay hadallada “aan dareenka lahayn” ee madaxweynuhu uu telefoonka ku sheegay.
Waxay ku eedeysay inuu ka oohiyey Myeshia Johnson. Laba alifle Johnson hooyadiis, Cowanda Jones-Johnson ayaa iyana u sheegtay wargayska Washington Post in madaxweyne Trump “uu sharaf dhac ku sameeyey wiilkeeda”.